वीर अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको आँखा नि’कालेको अ’फवाह भन्छ अस्पताल तर जनताले प’त्याएनन! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
वीर अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको आँखा नि’कालेको अ’फवाह भन्छ अस्पताल तर जनताले प’त्याएनन!
काठमाडौं।वीर अस्पतालमा मृ’त्यु भएका ए’क कै’दी ब’न्दीको श’वबारे सामाजिक सञ्जालमा वि’वादास्पद कुरा आएपछि अस्पतालले वि’ज्ञप्ति नि’काल्दै उक्त घ’टनाबारे तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा केदार सेन्चुरीले श’वलाई उ’पयुक्त रे’फ्रिजेरेटरमा न’राख्दा स’ड्न ग’ल्नसक्ने भन्दै ग’लत प्र’चारवाजी न’गर्न आ’ग्रह गरेका छन् । रुपन्देहीका ६३ वर्षीय कै’दीबन्दीको उपचारको क्रममा मृ’त्यु भएपछि उनको ह’त्या गरिएको भन्दै मृ’तककी छोरी ल’गायत आ’फन्तले अस्पतालमा पु’गेर वि’रोध ज’नाएपछि अ’स्पतालमा भी’ड लागेको थियो ।
चिकित्सकले भने ती कै’दीबन्दीको उपचारको क्रममा मृ’त्यु भएको र केही दि’र्घरोग समेत रहेको बताएका छन् । साथै निजको आँखा झि’केको, घाँटी का’टिएको जस्ता कुरालाई अ’फवाह भन्दै अस्पतालले को’रोना त्रा’सले गर्दा पो’स्टमार्टम र अ’न्त्यष्टि हुन नसकेको जनाएको छ । साथै भ्रा’मक समाचार स’म्प्रेषण भएकोमा अस्पतालले आ’पत्ति जनाएको छ ।
’श’वलाई उपयुक्त रे’फ्रिजेरेटरमा नराख्दा हुने यो सामान्य प्रक्रिया हो। यो मे’डिकल अवस्थालाई नबुझी केही सञ्चारमाध्यमहरुमा आँ’खा नि’कालिएको, चो’टपटक लागेको र घाँ’टी का’टिएको जस्ता भ्रा’मक समाचार स’म्प्रेषण भएकोमा ती समाचारमा कुनै स’त्यता र य’थार्थ छैन,’ डा अस्पतालको वि’ज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
Previous अस्पताल बाट तिन करोड नेपालीलाई पाईलट विजय लामाको सन्देश!( भिडियो सहित),हेर्नुहोस।😓
Next भारतले लिपुलेक-लिम्पियाधुरा दाबी गरे झैं लाप्चा बगर आफ्नो भएको चीनको दा’बी,सरकार किन मौन?